Abagwebi 17 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Kwaye kukho indodaindoda yelasezintabeni zakwaEfrayim egama linguMika.
2 Yathi kunina, IwakaIwaka lesilivere elinakhulu-nye elalithatyathwe kuwe, owashwabula ngenxa yalo, kananjalo wathetha ngalo ezindlebeni zam, yabonayabona, isilivereisilivere leyo inam; yathatyathwa ndim. Wathi unina, Usikelelwe, nyana wam, nguYehovanguYehova.
3 Walibuyisela kunina iwakaiwaka lesilivere elinakhulu-nye. Wathi unina, Ndiyingcwalisile yonke isilivereisilivere leyo kuYehova; iphuma esandleni sam ukuba ibe yeyonyana wam, enze umfanekisoumfanekiso oqingqiweyo nomtyhido; ndiyibuyisela kuwe ke ngoko.
4 Wayibuyisela ke kunina isilivereisilivere. Wawathabatha unina amakhulu omabini esilivere, wawanika umnyibilikisi, wenza ngawo umfanekisoumfanekiso oqingqiweyo nomtyhido; waba sendlwini kaMika.
5 IndodaIndoda leyo inguMika ibinendlu yoothixo, yayenze iefodi nemilondekhaya; yayimisele omnye koonyana bayo, waba ngumbingeleli wayo.
8 Yahamba indodaindoda leyo, isuka kuloo mzi eBhetelehem yakwaYuda, yaya kuphambukela apho ingafumana indawo. Yafika kweleentaba lakwaEfrayim endlwini kaMika, ihamba uhambo lwayo.
10 Wathi uMika kuyo, HlalaHlala nam, kum ube ngubawo nombingeleli; ndokunika mna ishumiishumi lesilivere ngomnyaka, ndikuxhase ngento eziingubo nekukudla. Waya ke umLevi lowo.
Exploring the Meaning of Abagwebi 17